ट्याग: सामाजिक डाटा | Martech Zone
ट्याग: सामाजिक डाटा
शनिबार, अगस्ट 29, 2015 आइतबार, अगस्त 30, 2015 Douglas Karr
व्यवसायहरू निरन्तर संभावनाहरू र ग्राहकहरू दुबै पत्ता लगाउन र लिड्स आकर्षित गर्न डेटा कब्जा गर्न कोशिस गर्दैछन, र त्यसपछि उनीहरूले प्राप्त गरेको ग्राहकहरूलाई राख्न र राख्नका लागि। यस डेटालाई कब्जा गर्न प्रयास गर्न त्यहाँ धेरै टन टेक्नोलोजीहरू छन्। केहि स्रोतहरू गलत छन् र अरूहरू मिति बाहिर छन्। धेरै नराम्रो जानकारीको स्रोत थिएन जुन सहि र लगातार अपडेट गरिएको थियो मानिसहरू द्वारा। त्यहाँ छ! व्यक्ति लगातार र बारम्बार छोड्दछन्
यो सीजेजी डिजिटल मार्केटिंगबाट अर्को महान इन्फोग्राफिक हो, १० सोशल मिडिया मार्केटि Tre ट्रेन्डहरू यस २०१ Watch लाई हेर्ने। यो तपाईंको सामग्री, सामाजिक र मोबाइल रणनीतिहरूको समीक्षा गर्न महत्वपूर्ण छ जहाँ तपाईंलाई केही अन्तरहरू हुनसक्दछ। 10 सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को प्रवृत्ति यस 2015 हेर्न को लागी सामग्री मार्केटिंग अधिक सामाजिक प्राप्त गर्न जारी छ। रियल टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बज शब्द हुनेछ। अडियो र भिडियो सामाजिक सामग्री हावी हुनेछ। त्यहाँ एक निरन्तर, स्थिर बदलाव छ
धेरै बजार र बिक्री को रूपमा, थोप्ला जडान कहिलेकाँही गाह्रो हुन्छ गतिविधि उपभोक्ताहरूले लिने गतिविधि र खरीदको वास्तविक बिन्दु बीचमा। कुनै श doubt्का छैन, यद्यपि, त्यहाँ सामाजिक गतिविधि र खरीद व्यवहार बीचको एक सम्बन्ध छ। सीएमओहरूले अनुसन्धान गर्न थालेका छन् कि त्यहाँ कारक पनि छ ... रमाईलो सामानहरू! ईकमर्सका लागि सोशल मिडिया मार्केटिंग प्लेटफर्म, सोशियलएनेक्सबाट आएको इन्फोग्राफिकले केहि खोजहरू प्रदान गर्दछ। उपयोगी ग्राहक जानकारी, यो नेतृत्व, जनसांख्यिकी, भावना, उपभोक्ता हुनुहोस्
टेक्नोलोजी ब्लगहरू महत्त्वपूर्ण छ Martech Zone। जब म कसरी एक विशिष्ट टेक्नोलोजी मार्केटिंग लाई प्रभाव पार्दै छ भन्ने बारेमा लेख्छु, यो प्राय: टेक्नोलोजी ब्लगबाट प्रेरित हुन्छ। प्रविधिको बारेमा समाचार र विचारहरू कभर गर्नको लागि उनीहरूले सामान्यतया ठूलो काम गर्छन्, तर यसको व्यावहारिक मार्केटिंग अनुप्रयोगहरूमा मिस हुन्छन्। ठूला केटाहरू सँधै सबैभन्दा ठूलो समाचार स्कूप, भर्खरको गफ, वा केहि उत्कृष्ट पोस्ट शीर्षक फ्याँक्न खोज्दछन् जसले सबैको ध्यान आकर्षण गर्छ।